Hlola iziqhingi zaseCanary - World Tourism Portal
Hlola iziqhingi zaseCanary
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Canary Islands.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeziQhingi zaseCanary
Bukela ividiyo ekhuluma ngeziqhingi zaseCanary
Hlola iziqhingi zaseCanary ku iziqhingi zaseSpain nomphakathi oseningizimu nambili ozimele we Spain etholakala olwandle i-Atlantic Ocean, ama-100 amakhilomitha asentshonalanga ye Morocco endaweni esiseduzane. Iziqhingi zaseCanary, ezaziwa nangokwethukela njengamaCanaries, ziphakathi kwezifunda ezingaphandle kwe-European Union efanele. Futhi ngesinye sezifunda eziyisishiyagalombili ngokubhekisisa ngokukhethekile ubuzwe bomlando obonwa kanjalo nguHulumeni waseSpain. Iziqhingi zaseCanary zingePuleti yase-Afrika efana namadolobha aseSpain aseCeuta naseMelilla, lawo womabili asenkabeni ye-Afrika.
Iziqhingi eziyisikhombisa eziyinhloko (kusuka kwezincane kakhulu kuya kwezincane endaweni)
Lesi siqhingi sihlanganisa iziqhingi eziningi ezincane neziqhingi:
I-Isla de Lobos,
Iziqhingi zaseCanary ziyisifunda esiseningizimu impela Spain nesiqhingi esikhulu kakhulu nesinabantu abaningi esifundeni saseMacaronesia. Ngokomlando, iziQhingi zaseCanary zithathwe njengebhuloho phakathi kwamazwe amane: i-Afrika, iNyakatho Melika, iNingizimu Melika kanye neYurophu.
I-Tenerife Auditorium. ITenerife Auditorium iyisakhiwo esihle kakhulu esakhiwe umakhi wezakhiwo waseSpain odumile uSantiago Calatrava. Kunconywe kakhulu ukuthi izivakashi zivakashele lesi sakhiwo esimangalisayo futhi sithokozise noma yimaphi amakhonsathi nemicimbi ebanjwa kuyo.
ILoro Parque. I-Loro Parque emangalisayo (iParrot Pak) ngokuqinisekile izokujabulisa noma ngabe ungakanani ubudala bakho. Ukuvakashela ipaki kungakuthatha cishe usuku lonke, ngakho-ke gcina isikhathi esithile. Ipaki ebikade inikelwe kwimibukiso yamapharishi manje isikhule yakhanga okwesibili ngobukhulu i-Tenerife ngemuva kwe-Mount Teide.
I-Loro parque iyikhaya lokuqoqwa okubaluleke kakhulu kweParrot emhlabeni ngezinhlobo ezingaphezu kwe-300, isibonakaliso esimangalisayo sombukiso, iDolphin Show, iParrot Show, i-Aquarium enomhubhe waseShark, ama-Gorillas, amaChimpanzee, ama-Tiger, ama-Jaguars, ama-Flamingos, ama-Alligators, ama-Tortoises, i-Orchid House, IMakethe yaseGambian, i-'inuraVision 'Cinema kanye nePenguinarium yomhlaba jikelele enesimo sezulu esikhiqiza kabusha i-Antarctic lapho amathani e-12 eqhwa ewela khona ngosuku.
I-Puerto de la Cruz. IPuerto de la Cruz ingesinye sezindawo zokuphumula eziphezulu eCanary Islands. Ibuye ibe yisikhathi eside kunazo zonke esakhiwa kunazo zonke izindawo zokungcebeleka eziseTenerife. Ingxenye yakudala yedolobha igcina izindawo ezinhle, enye yezindawo ezimbalwa lapho abantu bendawo besasebenza khona, bedla futhi bephuza. Iningi lendawo ezungeze ichweba elidala lokudoba ligcwele imigwaqo emincane eboshwe ngamatshe egcwele ukwakhiwa kwamakoloni.
Ukuvakasha kwaseBrithani kufike lapha esikhathini esingaphezu kwekhulu leminyaka futhi namuhla i-'el Puerto' inesikhala esikhulu samahhotela amahle ukuze alungele konke ukunambitheka kanye nezabelomali. Ngokungezelela ezinhlelweni zayo zakudala zomhlaba unikeza ezinye zokuvakasha okuhle kweziqhingi.
Amabhishi eTernerife. Isimo sentaba-mlilo yesiqhingi saseTenerife sasisho ukuthi izwe linamabhishi emvelo ambalwa. Lokho okukhona kubonakaliswa yisihlabathi esimnyama esakhiwe emadwaleni alesi siqhingi. Isidingo sendawo yokuvakasha yokugezela ilanga yabavakashi, nokho, siholele ekwakhiweni kwezindawo zokungcebeleka namabhishi enziwe ngabantu, kanti kungeniswe kwamanye amazwe isihlabathi segolide.
Amanye amabhishi ahamba phambili eTenerife yiLos Gigantes neSan Juan entshonalanga neFañabe, eningizimu nesihlabathi sayo segolide, izihlambi kanye nezindawo ezinhle kakhulu. Futhi ithandwa kakhulu yiTorviscas nge-marina yayo, iPlaya las Americaas ngokunwebeka kwesihlabathi sayo esimpunga kanye nolwandle i-los Cristianos '. ICandelaria empumalanga inebhishi elincane elimnyama elicijile. Enyakatho nePuerto de la Cruz kunebhishi ngesihlabathi esimnyama esihle, futhi Santa Cruz isihlabathi segolide singeniswe ogwini lwaso lweTerasitas.
Ukuhamba ngesikebhe kusuka eTenerife. Iningi lezinkampani linikezela ngezikebhe zokuhambela izivakashi, ezihlukahluke kusuka 'ku-booze cruise' ku-cruiser enikeza ukudla kwasemini, iziphuzo kanye nemidlalo yamanzi ohambweni oluzungeza isiqhingi ngesikebhe noma nge-catamaran. Enye yezinto ezithandwa kakhulu yithuba lokubona imikhomo namahlengethwa endle. Izivakashi emihambweni eminingi yohambo; dolphin akuyona into eqinisekile kodwa ingabonakala ngokubanzi - imvamisa isondele kakhulu esikebheni. Uhambo luqhamuka ePuerto Colon ePlaya de las Americaas, noma ethekwini eLos Cristianos kanye nabasebenza kakhulu banikeza insizakalo yamabhasi amahhala kusuka emahhotela amakhulu ezindaweni zokugcina ezinkulu.
Ukudoba Okukhulu Kokuzungeza iTenerife. Iziqhingi zaseCanary zingenye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni zokudotshwa kwemidlalo enkulu futhi izinkampani eziningi zinikezela uhambo lokudoba eTenerife. Ngenkathi i-marlin eluhlaza okwesibhakabhaka inhlanzi eyigugu ebaluleke kakhulu kunezinhlobo zezinye izinhlobo kufaka i-white marlin, i-wahoo, i-dorado, i-yellowfin tuna, kanye ne-mako ne-hammerhead shark. Ukubanjwa okuvamile kwebanga le-marlin eluhlaza okwesibhakabhaka kusuka ku-150 kuya ku-225kg.
I-cuisine yaseCanada ingxube phakathi kwamasiko waseSpain, Latin kanye ne-Afrika. Iningi le-cuisine yaseCanada iyimifino ehlukahlukene, izithelo nenhlanzi, ukudla okulula okulula, okulula kakhulu ukukugaya esimweni sezulu esifudumele. Inyama ivame ukudliwa njengengxenye yezitshulu noma njengama-steaks.
Izinhlanzi zasendaweni zilungile impela. Uzothola izinhlobonhlobo zokupheka zomhlaba wonke kwezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle, nazo. Izitsha ezimbili ezidumile zezinhlanzi ezivela eTenerife yiCaldereta, isidlo samatamatisi, inyama yembuzi namazambane neSancocho Canario, inhlanzi enosawoti, evame ukuba mhlophe, kwisoso “se-mojo”.
I-Tapas mindis enye yeminikelo emnandi kakhulu yaseSpain ku-gastronomy yomhlaba. I-Tapa iyingxenye yokudla okulula nokuncane amaSpain anakho ngaphambi kokudla kwasemini noma isidlo sakusihlwa, imvamisa enengilazi ye wayini noma kabhiya. ITapa lingavezwa ngezindlela eziningi. Kungenziwa njenge-pincho (ngenduku), njengesidlo esisetshenziselwa iresiphi yendabuko, njengethanga, njll.
Iziqhingi zaseCanary yizona zangaphandle zaseYurophu ezikhipha ubhanana. Ziyathandeka ezimnandi lapha. Lamabhanana ngokuvamile ahlanganiswa kanti futhi atholakala naseWest Indies.
I-Papas Arrugadasor papa sancochada - Amazambane abilisiwe emanzini anosawoti amaningi aze "acwebe" - yingakho igama lelo - futhi akhonze nge-mojo picón, isoso elibomvu elinephunga elibandayo elenziwe ngo-chili nogalikhi. Lezi zivame ukukhonzwa njenge-tapa.
I-Gofio- yokusanhlamvu okusanhlamvu okusetshenziselwa ikakhulukazi ibhulakufesi noma ukuhambisana nesidlo sendawo.
I-Escaldón de gofio- Gofio exutshwe nomhluzi.
Miel de Palma- Palm uju.
Ama-Arepasas enziwa ngofulawa wempuphu ocolekile ogcwele inyama eyosiwe, ushizi, noma umango omnandi.
I-Mousse de gofioor gofío masado - ihlane elenziwe nge-gofio, miel de palma, nama-plantain.
Amawayini. Kunamagatsha amaningi ewayini eziqhingini. INyakatho yeTenerife, iLa Geria eLanzarote noma iLa Palma bayithande kakhulu izivini.
Iramu. Kukhona futhi namafektri azi kahle ama-rum, ikakhulukazi eGran Canaria (Artemi nase-Arehucas). I 'ron miel' ngotshwala obumnandi obenziwe nge-rum noju.
IBarraquito, ebizwa nangokuthi i-barraco, iyindlela ekhethekile yekhofi evela eziqhingini zaseCanary futhi ithandwa kakhulu eTenerife kodwa naseLa Palma.
Ubhiya. Kukhona amafektri amathathu endawo kabhiya (iDorada, iTropiki neReina).
Iziqhingi zinesimo sezulu esishisayo esineziqongo, enamahlobo esikhathi esishisa kakhulu nobusika obufudumele.
Iziqhingi zaseCanary zineziqiwu ezine zikazwelonke, kanti ezimbili zazo zimenyezelwe yi-World Heritage Site yi-UNESCO, kanti ezinye ezimbili zamenyezelwa iWorld Biosphere Reserve, lezi ziqiwu zikazwelonke:
ICaldera de Taburiente National Park (La Palma): Yadalwa ngo-1954, kwathiwa yi-World Biosphere Reserve e-2002. Ihlanganisa indawo eyi-46.9 km2.
IGarajonay National Park (La Gomera): Yadalwa ngo-1981, kwathiwa ngo-1986 yi-World Heritage Site. Indawo yayo ingamahektha we-3986 ngasisekelo kanye nezindawo ezithile ezisenyakatho yesiqhingi.
I-Timanfaya National Park (Lanzarote): Yadalwa ngo-1974, kwathiwa yi-Biosphere Reserve e-1993, kanye nesiqhingi sonke. Umsebenzi endaweni ye-51.07 km2, itholakala eningizimu-ntshonalanga yesiqhingi.
I-Teide National Park (Tenerife): Yadalwa ngo-1954, kwathiwa yi-World Heritage Site e-2007. Ihlanganisa indawo engamahektha we-18,990, iyipaki likazwelonke elidala nelikhulu kunawo wonke eziqhingini zaseCanary futhi esinye sezindala kakhulu eSpain. I-Teide e2010 yaba ipaki likazwelonke elivakashelwa kakhulu eYurophu nakwesesibili emhlabeni jikelele. Itholakala enkabeni yezwe yesiqhingi indawo evakashelwa kakhulu eSpain National Park eSpain. Okugqamile yile I-Teideendaweni ephakeme ngamamitha we-3,718, ukuphakama okuphezulu kwezwe nentaba-mlilo yesithathu enkulu eMhlabeni kusukela kusisekelo sayo. I-Teide National Park yamenyezelwa e2007 njengenye ye-12 Treasure of Spain.
Umnotho ususelwa ikakhulu kwezokuvakasha, ezenza ama-32% we-GDP. AmaCanaries athola cishe izivakashi eziyizigidi ezingama-12 ngonyaka. Ezokwakha zenza cishe i-20% ye-GDP nezolimo ezishisayo, ikakhulukazi ubhanana nogwayi, ziklanyelwe ukuthunyelwa emazweni aseYurophu naseMelika. Izazi zezemvelo zikhathazekile ukuthi izinsizakusebenza, ikakhulukazi eziqhingini ezomile kakhulu, ziyaqolwa kepha kusenezinsizakusebenza eziningi zezolimo ezinjengotamatisi, amazambane, u-anyanisi, udoti, umoba, amagilebhisi, imivini, izinsuku, amawolintshi, ulamula, amakhiwane, ukolweni, ibhali , ummbila, ama-apricots, amapetshisi kanye nama-alimondi.
Iziqhingi zithole ukukhula okuqhubekayo phakathi nesikhathi seminyaka ye-20, kuze kube yi-2001, ngesilinganiso esilingana ne-5% ngonyaka. Lokhu kukhula kudalwe kakhulu ngamanani amakhulu we-Invest Direct Investment, ikakhulukazi ukuthuthukisa indawo yezokuvakasha (amahhotela nezindlu), kanye Nezimali ZaseYurophu, njengoba iziQhingi zaseCanary zibizwa ngokuthi yi-Region Objective 1 (efanelekile kwizimali ze-euro). Ngokwengeziwe, i-EU ivumela uHulumeni waseCanary Islands ukuthi anikeze izivumelwano zentela ezikhethekile zabatshalizimali abazifaka ngaphansi kombuso weZona Especial Canaria (ZEC) futhi zidale imisebenzi engaphezu kwesihlanu.
I-Tenerife South Airport - I-Tenerife
I-Tenerife North Airport - I-Tenerife
Isikhumulo sezindiza saseLanzarote - iLanzarote
I-Fuerteventura Airport - I-Fuerteventura
Isikhumulo sezindiza saseGran Canaria - IGran Canaria
Isikhumulo sezindiza saseLa Palma - eLa Palma
Isikhumulo sezindiza iLa Gomera - La Gomera
I-El Hierro Airport - I-El Hierro
Ichweba lasePuerto del Rosario - Fuerteventura
Isango lase-Arrecife - iLanzarote
Ichweba lasePlaya Blanca — eLanzarote
Port of San Sebastian de La Gomera - La Gomera
Imbobo ye I-Las Palmas - IGran Canaria
Port of Agaete - IGran Canaria
Imbobo ye Santa Cruz de Tenerife - I-Tenerife
Kuma-1960s, iGran Canaria yakhethwa njengendawo yesinye seziteshi zomhlaba ze-14 kuMoses Space Flight Network (MSFN) ukuxhasa uhlelo lwe-NASA space. Isiteshi saseMaspalomas, esiseningizimu yesiqhingi, sabamba iqhaza eminyangweni yemikhala eminingi kubandakanya i-Apollo 11 Moon landings and Skylab. Namuhla kusaqhubeka nokweseka ukuxhumana kwe-satellite njengengxenye yenethiwekhi ye-ESA.
Ngenxa yendawo ekude, kutholakala indawo yokubuka izinkanyezi esiqhingini esikhulu, kufaka phakathi iTeide Observatory on Tenerife, iRoque de los Muchachos Observatory eLa Palma, kanye neTemisas Astronomical Observatory eseGran Canaria. Hlola iziqhingi zaseCanary ngolwazi olukhulu lweholide empilweni yakho.
Hlola iziqhingi zaseCanary futhi uzozithanda.
IRisco Caido nezintaba ezingcwele zeGran Canaria Cultural Landscape